TextMagic: Iyo Yakazara-Inoratidzirwa Bhizinesi Yemeseji Mameseji (SMS) Platform | Martech Zone
Kunyangwe zviri zviviri-chokwadi chechokwadi kana kugadzira kudya kwemanheru, ini ndave kutanga kuona kuti ini ndanyanya kusununguka kushandisa mameseji (SMS) kupfuura zvandaive makore mashoma apfuura. Handifunge kuti ndini ndega… vatengi nemabhizinesi zvakafanana vanofara kutumira nekutumira mameseji pane kukanganiswa nekufona.
Pane nyaya, zvakadaro, ndeye maitiro ekugadzirisa ese iwo kutaurirana pane bhizinesi-chikamu. Ndipo panotumirwa mameseji ekutumira mameseji. Nemapuratifomu akaita TextMagic, bhizinesi rinogona kutumira zviziviso, zviyeuchidzo, zviyeuchidzo, zvivimbiso, uye nhepfenyuro yeSMS yekushambadzira kunze kwemumwe mushandisi interface.
Statistics paMeseji Mameseji
Mamirioni 15.2 mameseji anotumirwa miniti yega yega pasirese
95% yemeseji inoverengwa mukati memaminitsi matatu ekutumirwa
4.2 bhiriyoni vanhu vanotumira mameseji pasi rese
90 masekondi inguva yepakati yekupindura mameseji
75% yevanhu vanosarudza zvipo zvekutumirwa kuburikidza neshoko
MaSMS Zvimiro Zvinokura Bhizinesi Rako
Tumira Zvinyorwa Pamhepo - Tumira chinyorwa online kune vako vashandi uye vatengi. Tumira mafoni uye gadzirisa zvinyorwa zvese kuburikidza neako TextMagic account.
Email ku SMS - Kutumira zvinyorwa kubva kuemail kuri nyore. TextMagic inoshandura email yako kuita meseji uye inoitumira, nemhinduro dzese dzichisvika seemail.
SMS Gateway API - Sanganisa TextMagic's SMS gedhi newebhusaiti yako kana software uchishandisa mameseji eSMS API uye wedzera mameseji kubhizimusi rako rekufambisa.
SMS Software yePC & Mac - TextMagic Messenger chirongwa che desktop chinokutumira kutumira mameseji akananga kune vateereri vako, chero imwe panguva kana yakawanda.
Mbiri-Nzira SMS Chat - Tumira uye gamuchira mameseji meseji neTextMagic's online SMS chat Izvo zvakakwana kune kure kure kutaurirana nevashandi uye vatengi.
SMS Distribution Rondedzero - E-mail inotumirwa kukero yekuparadzira kero inotumirwa pakarepo semeseji kune ese manhamba efoni akachengetwa mune runyorwa.
Gamuchira SMS Online - Shandisa TextMagic's yakatsaurwa kana yakagovaniswa manhamba eSMS kuti ugamuchire inbound SMS uye mhinduro kune ako mameseji kubva kune vatengi uye vashandi.
Global SMS Inovhara - Svikira vatengi vako uye vashandi pasi rese nekuwana kune anopfuura chiuru nhare mbozhanhare kune mazana maviri+ nyika.
App yeIOS & Android - Kurumidza kutumira uye gamuchira mameseji eSMS, gadzira zvinyorwa uye vanofambidzana, gadzirisa ako mishandirapamwe pane nhunzi uchishandisa yako nhare mbozha.
Zapier SMS Kubatanidzwa - Shandisa Zapier kubatanidza TextMagic nemapurogiramu ako aunofarira. Icho chiri nyore kushandisa michina inobatsira bhizinesi rako.
Saina-Kusainira KweMabhizinesi - Kupinda kune TextMagic uchishandisa yako yakachengeteka chitupa chekupa zvitupa uye nyore kupa mukana kune ako timu nhengo.
Enterprise SMS Mhinduro - Enterprise mhinduro dzinosanganisira odhita matanda, basa-rakavakirwa kuwana, uye SSO izvo zviri zvimwe zvezvinhu zvinokubatsira iwe kukura.
SMS Ongororo yeKutora Mhinduro - Natsiridza ruzivo rwevatengi uye tora yakakosha mhinduro pane ako masevhisi ipapo uye kubva kune chero vateereri.
Mbiri-Factor Kusimbisa (2FA) SMS - Simbisa vashandisi kuburikidza nemeseji, chengetedza yakaderera-chikamu kutengeserana, uye wedzera imwe yekuwedzera dura rekuchengetedza kune yako software.
Yekutakura Kutarisa & Kuvimbiswa Kwenhamba - Ziva nhamba dzenhare dzisingaite uye vatakuri ipapo ipapo uye uwane mhedzisiro uye zvirevo zvekutumira nemasaiti eSMS.
Email Kutarisa & Kugonesa - Tarisa chinzvimbo, kuburitswa, uye nenjodzi danho reemail neTextMagic yehunyanzvi email email yekusimbisa sevhisi uye API.
Kutanga ne TextMagic Zviri Nyore
Unogona kutanga mumatanho matatu ari nyore. Gadzira YEMAHARA account, mutoro wakabhadharwa chikwereti uye tanga kutumira uye kugamuchira zvinyorwa.
Gadzira Yemahara Akaundi - Saina account yako yemahara kuti uone kuti zviri nyore sei. Edza zvese maficha uye shandisa yemahara kiredhiti kutumira nekutambira mameseji chero kupi zvako pasi.
Mutoro Wakabhadharwa Chikwereti - Paunenge wagadzirira kutumira yako yekutanga meseji meseji, shandisa edu akareruka akabhadharwa echikwereti kubhadhara kubhadhara-se-iwe-kuenda (pasina zvibvumirano, zvakavanzika mari kana kuenderera fizi).
Tumira & Gamuchira SMS - Tumira uye ugamuchire SMS pese paunoda neyakareruka yekuzvishandira-interface. Zviri nyore sekutumira email kana SMS kubva kune yako foni.
Saina Chikwangwani cheMahara ChinyorwaMagic Trial Akaundi
Kuzivisa: Isu tiri TextMagic Kushamwaridzana.
Tags: email kune smsSMSsms apisms chikuvamesejimameseji kutumira apimameseji mameseji chikuvatextmagic